Foibe Kung Fu Wushu etsy 67 ha : Handray vahiny manan-kaja avy any Chine -
AccueilSongandinaFoibe Kung Fu Wushu etsy 67 ha : Handray vahiny manan-kaja avy any Chine
Foibe Kung Fu Wushu etsy 67 ha : Handray vahiny manan-kaja avy any Chine
Hanam-bahiny ny Kung Fu Wushu izay manana ny foibeny etsy 67 ha amin’io herinandro io. Amin’ny talata faha-16 avrily 2018 tokoa mantsy, dia handray an’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Kung Fu Wushu avy any Chine ry Maitre Gao na Ramaherison José. Hidinika indrindra momba ny fampandrosoana ny Kung Fu Wushu eto Madagasikara izy ireo mandritra izany.
Tafiditra indrindra amin’ny fanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Kung Fu Wushu eto Madagasikara sy ny any Chine moa izao fitsidihana hataon’ireo tompon’andraikitra ambony izao.
Reharehan’ny Malagasy tokoa ny fananana ity Ramaherison José dit Maitre Gao ity. Satria dia tsy mitsahatra mitady izay hampandrosoana ny taranja Kung Fu Wushu entina hitaizana tanora izy. Nanomboka ny taona 2014 hatramin’ity taona 2018 ity moa dia izy no filohan’ny Federasiona malagasin’ny Wushu. Maro ny ezaka vita nandritra izay fotoana izay hoy izy, saingy mbola ho avy ny fotoana hitaterana izany amin’ny vahoaka.
Tsy maintsy miroso hatrany isika, hoy i Maitre Gao satria fandrosoana no tanjona. Ankoatra ny Kung Fu tokoa mantsy, dia olona tia fandrosoana i Maitre Gao, ary manana tetikasa fampandrosoana maro entina mampandroso ny firenena ihany koa. Faniriany ny hitondrany ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ireo tetikasa maro ara-tsosialy sy ara-toekarena ao aminy. Efa Malagasy rahateo izy ka efa mihevitra ny fampandrosoana ho an’ny Malagasy ihany koa.
Tsiahivina fa ny Kung Fu Wushu dia taranja hifaninanana amin’ny lalao Olympika manerana izao tontolo izao. Ny Kung Fu Wushu ihany koa no be mpanara-dia indrindra eran-tany, ary ireny hitantsika amin’ny horonan-tsary Sinoa ireny ny fahaiza-manao nasehony.
Nody ventiny ny rano nantsakaina teo amin’ny fiaraha-miasan’ny Fitsarana Malagasy sy Frantsay, manodidina ny fikarohana sy ny fanadihadiana ny famotsiam-bola maloto azo avy amin’ny trafika sy fanodikondinana volam-panjakana nataon’i Mamy Ravatomanga nandritra ny Tetezamita. Araka ...Tohiny